WAR CUSUB: Muuday ”Waa muhiim in laga fekero halkii laga yimid”! | HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Siyaasiga Xasan Cabdiqaadir Muudey ayaa aragtidiisa ku biiriyay dareenka ay Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka muujiyeen go’aankii ay dowladdu isu hortaagtey wafdigii Shariif Sheekh Axmed, ee Axadii ku wajahnaa Magaalada Kismaayo.
Mr. Muudey ayaa sheegay in dowladnimada dalka ay tahay mid ka wada dhaxeysa shacabka Soomaaliyeed, balse ay jiraan dad iminka u muuqda in ay soo baraarugeen, iyagoo ku tumanaya karaamadii uu dadku lahaa.
“Dowladnimada dalka waa mid ka wada dhaxeysa dhammaan umadda Soomaaliyeed, waxaase jira kuwa aad isleedahay hadduuba waaga u baryay, oo aanan qiimeeynayn sharafkii iyo karaamadii la wada lahaa‘‘, Ayuu yiri Xasan Cabdiqaadir Muudey.
Waxa kaloo uu yiri “Cidna ma anfacayso in dalkeenu hoy u ahaado nidaam xumo iyo cadaalad darro, waana muhiim in laga fekero halkii laga yimid.”
Xasan Cabdiqaadir Muudey oo la soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray ayaa qaba in dadku kala feker duwanaan karo, loona baahan yahay in afkaaraha la isku hayo laga wada doodo.
“Dadku way kala aragti duwanaan karaan, waana muhiim in si furan looga doodo afkaaraha kala duwan, si loo helo xal nawada anfaca.” Ayuu yiri Xasan Cabdiqaadir Muudey.
Muudey ayaa qaba si horey loogu socodsiiyo Somaliyada cusub loo baahan yahay in laga gudbo in cid gaar ahi isu haysato in ay iyada oo qura tahay dowladnimada dalka ka jirta.
“Cid gaara haddaad tahay waxay noqoneysaa arrin carqalad ku noqoneysa horumarkii ay sameeyeen dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray, wixii ka dambeeyay burburkii Dowladdii Dhexe. Si Somaliya horey loogu socodsiiyo waa in laga gudbaa cid gaar ah.” Ayuu yiri Muudey oo warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa si adag kaga falceliyay tallaabadii ay dowladdu ku xanibtay diyaaraddii wafdiga Shariif Sheekh Axmed u qaadi laheyd Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Magaalada Kismaayo.
Wafdiga Shariif Sheekh Axmed ayuu ujeedkoodu ahaa in ay magaalada Kismaayo kaga qaybgalaan caleemo saarka Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Siyaasiga Xasan Cabdiqaadir Muudey
Waa muhiim in laga fekero halkii laga yimid